Semalt विशेषज्ञले निर्दिष्ट गर्दछ कि कसरी तपाईको म्याकलाई भाइरसबाट मुक्त गर्न सकिन्छ
यदि एकले आफ्नै म्याकको साथ समस्या अनुभव गरे, वा चिन्ता छ कि योसँग मालवेयर हुन सक्छ, यो पोष्टले व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क वा सस्तोमा यसलाई हटाउन मद्दत गर्दछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, त्यहाँ फेरि सुनिश्चित हुँदैनन् भन्ने उपायहरू छन्। यो एक धेरै संक्रमित म्याक छ कि धेरै संभव छैन। यद्यपि यो पीसीमा प्रसारण गर्ने सम्भावना धेरै छ। यो भन्न को लागी जादैन कि म्यास को लागी डिजाइन गरीएको कुनै मैलवेयर प्रोग्राम छैन। यो केवल सबैभन्दा लक्षित प्रयोगकर्ताहरू हुन् जसले आफ्ना प्रशस्तताका कारण पीसी प्रयोग गर्दछन्।
हालसालैका वर्षहरूमा म्याकको लोकप्रियता दुर्भावनापूर्ण व्यक्तिहरूको ध्यान केन्द्रित गरेको छ उनीहरूको पीठमा लक्ष्यहरू दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ। यस लेखमा जूलिया Vashneva देखि अग्रणी विशेषज्ञ Semalt , मालवेयर र प्रभावित Macs भाइरस मा केंद्रित।
मालवेयर दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर जस्तै भाइरस भन्दा फरक छ। कारण यो हो कि यो प्रयोगकर्ताको ज्ञान बिना कम्प्युटरमा प्रवेश गर्दैन। धेरै जसो केसहरूमा, यो वैध सफ्टवेयरको रूपमा प्रच्छन्न हुन्छ जसले प्रयोगकर्तालाई ट्रिक गर्दछ। यो विज्ञापनको रूपमा, वा ईमेलको रूपमा हुन सक्छ जसले प्रयोगकर्तालाई निश्चित कार्यक्रम स्थापना गर्न विश्वस्त गराउन सक्छ। त्यस पछि, यसले कम्प्युटरबाट निजी जानकारी बटोर्यो।
म्याक मालवेयरको साथ समस्या यो छ कि यसले चीजहरूको धेरै रूप लिन्छ जुन एक व्यक्तिले एक विरोधी मालवेयर सफ्टवेयर जस्ता समस्याको बिरूद्ध प्रयोग गर्न चाहान्छ। ह्याकरहरूले वैध वेबसाइटहरू लिन्छन् र आगन्तुकलाई बिभिन्न साइटमा पुनःनिर्देशित गर्दछ जहाँ उनीहरूले म्याकमा स्क्यान गरेर मालवेयर फेला पार्छन। यसका अतिरिक्त यसले सफ्टवेयर सुझाव दिन्छ, जुन आफैंमा मालवेयर हो। समस्याहरू स्क्यान गर्न र समस्या समाधान गर्ने बहाना गर्दै, यसले शुल्क लिन लगाउन सक्छ।
नि: शुल्क म्याक मालवेयर हटाउँदै
म्याक सफ्टवेयर, वा मालवेयर हटाउनाले मालिक कहिल्यै डाइम खर्च गर्न आवश्यक पर्दैन। प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको क्रेडिट कार्ड जानकारी कुनै प्रोग्राम वा वेबसाइटमा कम्प्युटर समस्याको समाधान नभएको दाबी नगर्न सल्लाह दिइन्छ।
त्यसो गर्दा, यदि एक व्यक्तिबाट एक कम्प्युटरमा मालिसियस सफ्टवेयर फेला पारेको दाबी गर्ने कल आएको छ भने, यो थिममा भिन्नता हो र कल एकैचोटि अन्त्य गर्नु उत्तम हुनेछ।
यहाँ गर्न को लागी चीजहरू छन् जब एक खास वेबसाइटले एउटा सतर्कता पप अप गर्दछ जब उसले खराब सफ्टवेयर भेट्टाएको छ भनेर दावी गर्दै:
१. ब्राउजर बन्द गर्नुहोस्।
२. डाउनलोड फोल्डरमा हेड गर्नुहोस् र बिनमा सबै अनावश्यक स्थापना फाइलहरू तान्नुहोस्।
Tra. रद्दी टोकरी खाली गर्नुहोस्।
यदि एक पहिले नै गल्तीले मालिसियस सफ्टवेयर स्थापना गरेको छ भने, निम्न चरणहरूले मद्दत पुर्‍याउनुपर्दछ:
१. युटिलिटी फोल्डर खोल्न "आदेश + Shift + U" थिच्नुहोस्।
२. गतिविधि मोनिटर खोल्नुहोस् र सबै चालु प्रक्रियाहरू छान्नुहोस्।
List. सूचीमा अनुप्रयोगको नाम फेला पार्नुहोस् र "प्रक्रिया बन्द गर्नुहोस्" मा क्लिक गर्नुहोस्।
Applications. अनुप्रयोग फोल्डरमा, अनुप्रयोग विवरणहरू फेला पार्नुहोस् र यसलाई रद्दीटोकरीमा तान्नुहोस् र खाली गर्नुहोस्।
मालवेयरबाट म्याकलाई बचाउँदै
अहिलेसम्म, म्याक सबै मालवेयरबाट स्वतन्त्र छ, र यो तार्किक छ कि कसैले यसलाई फेरि हुनबाट रोक्न चाहन्छ। तलका सुझावहरूले भविष्यमा मालवेयरबाट म्याकलाई सुरक्षित राख्दछ।
म्याकलाई सबै समयमा अद्यावधिक राख्नुहोस्।
स्वचालित अद्यावधिकहरू स्विच गर्नुहोस्।
केवल विश्वसनीय विकासकर्ताहरूबाट अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नुहोस्।
म्याक एन्टिभाइरस सफ्टवेयर स्थापना गर्नुहोस्।